परमेश्‍वर तिनीबाट लुक्नुभएको थियो भन्‍ने तथ्यले परमेश्‍वरमाथिको अय्यूबको विश्‍वासलाई हल्लाएनपरमेश्‍वर तिनीबाट लुक्नुभएको थियो भन्‍ने तथ्यले परमेश्‍वरमाथिको अय्यूबको विश्‍वासलाई हल्लाएन | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अय्यूब ४२:२-६ मलाई थाहा छ तपाईंले सबै थोक गर्न सक्‍नुहुन्छ, अनि तपाईंदेखि कुनै पनि विचारलाई रोक्‍न सकिन्‍न। कसले ज्ञानविना मेरा सल्लाहलाई लुकाउँछ? यसैले मैले नबुझ्‍ने कुरा मैले बोलेको छु; मेरो निम्ति अत्यन्तै अचम्मका कुराहरू, जुन मलाई थाहा थिएन। सुन्‍नुहोस्, म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु, अनि म बोल्‍नेछु: म तँपाईंसँग माग गर्छु र तपाईंलाई मप्रति घोषणा गर्छु। मेरो कानको सुनाइद्वारा मैले तपाईंको बारेमा सुनेको छु: तर अब मेरा आँखाले तपाईंलाई देख्छ। म किन आफैलाई घृणा गर्छु, अनि धुलो र खरानीमा पश्‍चाताप गर्छु।
यी शब्दहरूको जोड दिइएको कुरा के हो? के यहाँ एउटा तथ्य छ भन्‍ने तिमीहरूमध्ये कसैलाई थाहा छ? सर्वप्रथम, अय्यूबले परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाए? त्यसपछि, परमेश्‍वरले नै स्वर्ग र पृथ्वी र सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ भनी तिनले कसरी जाने? यो एउटा खण्डले यी दुई प्रश्‍नहरूको उत्तर दिन्छ: “मेरो कानको सुनाइद्वारा मैले तपाईंको बारेमा सुनेको छु: तर अब मेरा आँखाले तपाईंलाई देख्छ। म किन आफैलाई घृणा गर्छु, अनि धुलो र खरानीमा पश्‍चाताप गर्छु।” (अय्यूब ४२:५-६)। यी शब्दहरूबाट हामी के सिक्छौं भने, परमेश्‍वरलाई आफ्नै आँखाले देख्नुको सट्टा, अय्यूबले परमेश्‍वरको बारेमा पौराणिक कथाबाट जानेका थिए। यस्तै परिस्थितिमा तिनी परमेश्‍वरलाई पछ्याउने मार्गमा हिँड्न थाले, अनि पछि तिनले आफ्नो जीवनमा र सबै कुरामा परमेश्‍वरको अस्तित्व भएको पुष्टि गरे। यहाँ एउटा इन्कार गर्न नसकिने तथ्य छ—त्यो तथ्य के हो? परमेश्‍वरको भय मान्ने र खराबीबाट अलग रहने मार्गमा लाग्न सके पनि, अय्यूबले परमेश्‍वरलाई कहिल्यै देखेका थिएनन्। यस कुरामा, तिनी आजका मानिसहरू जस्तै थिएनन् र? अय्यूबले कहिल्यै परमेश्‍वरलाई देखेका थिएनन्, जसको अर्थ यो हो कि तिनले परमेश्‍वरबारे सुनेको भए पनि, परमेश्‍वर कहाँ हुनुहुन्छ, अथवा परमेश्‍वर कस्तो हुनुहुन्छ वा परमेश्‍वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा थिएन। यी सबै व्यक्तिपरक तथ्यहरू हुन्; निष्पक्ष रूपमा भन्ने हो भने, तिनले परमेश्‍वरलाई पछ्याएको भए पनि, परमेश्‍वर कहिल्यै तिनको अगि देखा पर्नुभएन वा तिनीसँग बोल्नुभएन। के यो तथ्य होइन र? परमेश्‍वरले अय्यूबसँग बोल्‍नुभएको थिएन वा तिनलाई कुनै आज्ञा दिनुभएको थिएन, तैपनि अय्यूबले परमेश्‍वरको अस्तित्व देखेका थिए र सबै कुरामा रहेको उहाँको सार्वभौमिकतालाई हेरेका थिए, र अय्यूबले कानले सुनेर परमेश्‍वरको बारेमा पौराणिक कथाहरूबाट सुनेपछि, तिनले। परमेश्‍वरको भय मान्‍ने र खराबीबाट अलग बस्‍ने जीवनको सुरुवात गरेका थिए। अय्यूबले परमेश्‍वरलाई पछ्याउने कार्यको सुरुवात र प्रक्रिया यही थियो। तर तिनले परमेश्‍वरको जति नै भय माने पनि र खराबीबाट जति नै अलग बसे पनि, तिनी आफ्नो निष्ठामा जति नै अडिग भए पनि, परमेश्‍वर अझै तिनकहाँ देखापर्नुभएन। हामी यो खण्ड पढौं। तिनले भने, “हेर्नुहोस्, उहाँ मेरो छेउबाट हिँड्नुहुन्छ, र म उहाँलाई दख्दिनँ: उहाँ जानु हुन्छ, तर म उहाँलाई देख्दिनँ” (अय्यूब ९:११)। यी शब्दहरूले के भनिरहेका छन् भने अय्यूबले आफ्नो वरिपरि परमेश्‍वरको अनुभव गरेको हुन सक्छ वा नहुन सक्छ—तर तिनले परमेश्‍वरलाई कहिल्यै पनि देख्‍न सकेका थिएनन्। कहिलेकहीँ तिनले परमेश्‍वर तिनको अगिअगि जानुभएको, वा उहाँले काम गर्नुभएको, वा अगुवाइ गर्नुभएको कल्पना गर्थे, तर तिनले त्यस्तो घटनाको बारेमा कहिल्यै जानेका थिएनन्। परमेश्‍वर मानिसकहाँ त्यसबेला आउनुहुन्छ जब उसले आशा गरेको हुँदैन; परमेश्‍वर कहिले आफूकहाँ आउनुहुन्छ वा कहाँ उसको सामने आउनुहुन्छ सो उसलाई थाहा हुँदैन, किनकि मानिसले परमेश्‍वरलाई देख्न सक्दैन, यसैले मानिसको लागि, परमेश्‍वर ऊबाट लुक्नुभएको छ।
अघिल्लो: अय्यूबको साक्षीले पछिका पुस्ताहरूलाई दिएको चेताउनी र ज्ञान
अर्को: अय्यूबले परमेश्‍वरको नाउँलाई धन्यको भन्छन् र आशिषहरू वा विपत्तिको बारेमा सोच्दैनन्